'रातारात संसद विघटन गरेर कोतपर्व मच्चाइयो' | GNN Nepal GNN Nepal 'रातारात संसद विघटन गरेर कोतपर्व मच्चाइयो' | GNN Nepal
निर्वाचन संविधानले तोकेबमोजिम हुनुपर्छ : सुदन किराती
एकजना राजनीतिज्ञले तपाईहरुलाई यसरी गलाएको छ कि तपाईहरुसँग अरु विकल्प नै छैन तपाईहरु यति निरीह किन हुनुभयो ?
सबैभन्दा बढी नैतिकता राजनीतिमा हुन्छ । समय र परिस्थितिले अनैतिक मान्छेलाई सत्तामा पुर्यायो । यतिबेला नेपालमा कोभिड संक्रमण अत्याधिक रुपमा बढिरहेको अवस्था छ । यस्तो समयमा जनतालाई उपयुक्त समयमा खोपको व्यवस्था गर्नु उत्तम हुन्छ । महामारीको बेलामा हुँदाछँदाको संसद् विघटन गरेर कोतपर्व मच्चाइएको छ । र कृत्रिम चुनावको घोषणा गरिएको छ ।
४० औं/ \_५० औं अर्ब खर्च गर्ने नौटंकी किन गर्नुपर्यो ? महँगीले आकाश छोएको छ । गरिब जनताले राहत पाएका छैनन् । यो ताण्डव नृत्यलाई इतिहासले क्षमा दिने छैन ।
तपाईहरुले राष्ट्रपतिको यो कदमविरुद्ध कुनै ‘एक्सन’ चाल्न सक्नुभएन नि…
अब संसद नै भंग गरिदिएपछि महाअभियोग कसरी ल्याउनु ? शीतल निवासमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सपथका क्रममा संविधानको हुर्मत लिएका छन् । उहाँहरुमा यदि नैतिकता हुन्थ्यो भने एक मिनेट पनि पदमा बस्न मिल्दैन । तर अनैतिक मान्छेलाई कतिसम्म भन्नु रु यो अनैतिक र असंवैधानिक कदमका विरुद्ध हामी राजनैतिक रुपले पनि लड्छौं कानुनी रुपले पनि लड्छौं ।
सफल हुनुहुन्छ ?
असम्भव भन्ने चिज संसारमा छैन । नयाँ सरकार गठनका लागि १३६ जना सांसदको बहुमत चाहिने अवस्थामा १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर हामीसँग थियो । हामी भोलि संसद्को लोगो लगाएर, सबै प्रमाणहरु लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाउँला नि त १ राष्ट्रपतिले हामीलाई यो अलि प्रक्रिया पुर्याएर भएन भनेको भए हामीले फेरि पनि त्यसलाई सुधार्न सक्थ्यौं । तर ठाडै मध्यरातमा कोतपर्व मच्याएर देश र जनतामाथि जालझेल गरियो । यो कदमका विरुद्ध हामी राजनैतिक संघर्ष गर्छौ ।
राजनैतिक संघर्ष भनेको कस्तो सडक आन्दोलन हो ?
हामी त्यति गैह्रजिम्मेवार छैनौं । देशमा कोरोना महामारी छ । केपी ओलीको सामन्ती शैलीको विरुद्धमा हामी डटेरै लाग्छौं । तर कोरोना महामारीका कारण हामीसँग त्यति ठूलो कार्यसूची छैन । हामी संसद सञ्चालन गर्न सक्छौं । सभामुखले संसद बोलाएर संसद् सञ्चालन गर्ने र संसद्मा बहुमत भएको दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छँदैछ । हामी यो प्रवृत्तिविरुद्ध डटेरै लाग्नेछौं ।
एउटा कुरा नि किराती ज्यू ! तपाईहरुलाई पनि बालुवाटारको भोक लागेकै हो । तपाईहरु सरकारमा पुग्नका लागि संघर्ष गरिरहनुभएको छ सरकारमा भएकाहरु सत्ता बचाउनका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । राजनीतिज्ञका नजरमा जनता प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैनन ?
यो गलत प्रश्न हो । हामीहरुले राजनीतिक स्थायित्वका लागि कम्युनिष्ट एकता गरेको थियौं । अहिलेसम्म मजदुरले के पाएँ रु कस्ताकस्ता विधेयक आए रु जस्केलाबाट विधेयकहरु आउन थाले । अहिले सीसीएमसीमा भ्रष्टहरुको राज छ । यति ठूलो महामारीमा सबैको समिति बनाएर हामी लड्नुपथ्र्यो । त्यसकारण हामीलाई बालुवाटारको भोक लागेको होइन ।
बालुवाटार गलत बाटोमा गयो । हामीले सही बाटो दिने प्रयत्न गरेका हौं । यदि ओली राजाजस्तो बन्न चाहन्छन् भने हामी त्यो मान्न तयार छैनौं ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न तपाईहरुलाई कसले छेक्यो भन्या ?
हामीलाई कसैले छेकेको होइन । हामीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै गर्दा हामीलाई अनेकन जालझेल र समस्या उत्पन्न भयो । हामीले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव किर्ते गरियो ।
निर्वाचनमा जाँदा तपाईहरुलाई घाटा के हुन्छ ?
हरेक तानाशाहहरु लोकतन्त्रको खास्टो ओढेर आइरहेका हुन्छन् । निर्वाचन संविधानले तोकेबमोजिम हुनुपर्छ । कुनै एउटा महाराजाको चाहानाले निर्वाचन सफल हुँदैन । यो कृत्रिम निर्वाचन मात्र हो । केपी ओलीले निर्वाचन गराउने वाला छैनन् । उनले विभिन्न बहानामा पद जोगाउने तर जनतालाई सधैँ बन्धकमा राख्ने रणनीति गरेका छन् । हामी त्यो रणनीति पूरा हुन दिन्नौं ।
त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालयमा धर्ना
असार २१ गते, २०७८